Boeny: nahazo Trano ho an’ny Olom-boafidy | Région Boeny
Nahazo Trano ho an’ny Olom-boafidy ny faritra Boeny. Tonga ny nitokana izany teny Mahavoky Avaratra Mahajanga, ny Zoma 26 may 2017, ny Praiminisitra Mahafaly Solonandrasana Olivier, notron’ny Ministry ny Serasera sy ny Fifandraisana amin’ny Andrimpanjakana, Rahajason Harry Laurent, izay mpiahy ny faritra Boeny, ary ireo mambra vitsivitsy ao amin’ny Governemanta.
Ny taona 2013 dia samy nahazo famatsiam-bola manokana na subvention exceptionnelle, mitentina 100 tapitrisa ariary avy tamin’ny Ministeran’ny Fitsinjaram-pahefana ny faritra 22.
Safidin’ny Faritra Boeny tamin’izay ny hampiasa ny ampahany tamin’io famatsiam-bola manokana io, hananganana ny Trano ho an’ny Olom-boafidy na Maison des Elus ao Mahavoky Avaratra, Mahajanga.
Noho ny olan’ny fananan-tany, dia sahirana tsy nahita toerana nanorenana azy io ny Faritra tamin’izany fotoana. Ny taona 2014 dia tapaka fa ao amin’ny toerana misy ny tobin’ny Mpamono afo an’ny Faritra ihany, ao Mahavoky Avaratra, izay mbola malalaka, no hananganana azy.
Mirefy 11m ny sakany ary 17m ny halavan’ity Trano ho an’ny Olom-boafidy ity. Niara-niasa tamina “Bureau d’études” ny Faritra Boeny, hiara-handinika ny drafi-pananganana sy ny tolo-bidy, ka nitentina 7 000 500ariary ny totalin’izay. Ny orin’asa SAMA no nahazo ny tolotra. Mitentina 80 000 195 ariary ny foto-drafitrasa ary ahitana birao fikirakirana informatika iray, birao lehibe fandraisan’olona iray, birao fiasana iray, trano fidiovana roa, ary efitrano lehibe fivoriana iray, mahazaka olona miisa 60 eo ho eo.
Natao hivorian’ireo Olom-boafidy rehetra avy aty amin’ny faritra Boeny, na miaraka amin’ireo mpiara-miombon’antoka amin’izy ireo, ity trano ity. Maimaim-poana fa tsy misy sarany no hampiasan’izy ireo azy.
Kanefa azon’ireo vondron’olona teknika ankoatr’ireo Olom-boafidy atao ny manofa ny Maison des Elus, amin’ny sarany mora. Ny vola azo amin’izany, dia tsy miditra amin’ny Faritra fa miantoka avy hatrany ny fanadiovana sy ny fikojakojana ny foto-drafitr’asa, ary handoavana ny jiro sy rano, mba tsy ho vesatra ho an’ny Faritra.
Biraom-paritry ny FDL
Tompon’nadraikitra iray, no mitantana ny Maison des Elus, miaraka amin’ny olona iray, samy mpiasan’ny Faritra izy ireo.
Fa ankoatra izay, araka ny fifanarahana nifanaovan’ny Lehiben’ny faritra Atoa Saïd Ahamad Jaffar, sy ny Tale jeneralin’ny FDL (Fonds de Développement Local) noho ity sampana ity izay misahana indrindra ny fampandrosoana ny Kaomina, dia natolotra hiasan’ny Biraom-paritry ny FDL eto Boeny, izay ahitana olona telo, ny birao roa.